Caalamka Online » Wasiirka Gaadiidka Cirka & Dhulka Xukuumada Soomaaliya ayaa sheegay in 30 Bishan La Soo Wareejinayo Maamulka Hawada
Wasiirka Gaadiidka Cirka & Dhulka Xukuumada Soomaaliya ayaa sheegay in 30 Bishan La Soo Wareejinayo Maamulka Hawada
Garoonka waxaa ka shaqeeyo shaqaale waqtigii aad xafiiska imaaneysay waxaad soo kordhiseen waqti dheeraad ah in la shaqeeyo shaqaalaha habeenkii shaqeeyo iyo sida aad u maamushaan waa ceynkee?
Shirkadaha ka shaqeeya garoonka sida Fivori, hay’adda socdaalka iyo dhalashooyinka way jiraan inay badiyaan shaqaalahooda kuwaas oo shaqeyn lahaa habeenkii annaga ahaan waxaan diyaarinay School oo soo saari doona dad loo tobabaray hawada qeybihiisa kala duwan, dadkaas waxay awood u yeelan doonaan waa labo qeybood: qeyb aan rajeyneyno inay annaga noo shaqeeyaan qeybta labaadna waa dad iskood loo tobabaray qarashkana iska bixin doona ka dibna u shaqeyn kara diyaaradaha sida gaarka ah loo leeyahay
Hawada Soomaaliya waa aad soo wareejiseyn maamul goboleedyo fara bandanna dalka waa ay ka dhisanyihiin kuwaas oo heysta hanaanka fedaraalka habka qeybsiga kheyraadka waa sidee?
Fedaraaliisimka waa sheyn muhiim ah oo hadda waddankaan sharciga u degsan oo lagu dhaqi doono waaye sidii loo wadaagi lahaa daqliga naga soo gala hawada waxyaabaha muhiimka oo hadda aan ka shaqeyneyno ayuu ka mid yahay inkastoo toos aysan wasaaradda umaamuli doonin oo wasaaradaha ku shaqada leh ay maamuli doonaan hadana wasaaradda waxay ka mid tahay wasaaradaha dhaqaalaha abuuri doono.
Waxaa la sheegay garoonka diyaaradaha in laga dhisi doono Hoteel, hotelkaasi maxuu yahay?
Garoomada caalamiga ah oo dhan inta ugu badan waxaa ku yaallo hoteello, hoteelada waa wax iska caadi ah in garoomada laga dhexdhiso marka heshiiska lagu gaaro hoteelka dhisiddiisa iyo meeshii laga dhisi lahaa ayaa muhiim ah marka in garoon dhexdiisa hotel laga dhiso waa wax iska normal ah in wax weyn loo arkana maahan sida in wadankii faraha laga bixiyey wax la siyaasadeeyana maahan.
Hawada sare dakhliga idin-ka soo gala iyo sida aad u maamushaan waa sidee?
Hawada duulista sare diyaaradaha mara waa sax inay kordheen waxyar daqligana wuu kordhayaa markii ay sii kordhaan diyaaradaha, hase ahaatee hawada serveska aan anagu siino waa shaqada aan u qabano diyaaradaha maraya hawada sare waxaa uu leeyahay levelyo kala duwan kuwa aan anagu siino hadda ee lacagta naga soo gasho waa lacag yar marka aan qalabka rakibno insha allah daqligeenu wuu kordhi doonaa”.